Safaaraddii Somaliya ee wadanka Talyaaniga oo Dibloosooceliyey – STAR FM SOMALIA
Ka dib muddo sanado ah oo Safaaraddu ay haysteen ganacsato u dhalatay dalka Talyaaniga, ayaa waxay Maxkamad ku taala Magaalada Roma ay go’aamisay in Dhismaha Safaaradda dib loogu celiyo gacanta Dowladda Somaliya.
Danjiraha Somaliya Ee Wadanka Talyaaniga, Danjire Muuse Xasan Sheekh iyo Somalida Magaalada Roma, ayaa dadaal badan ku bixiyay sidii dib gacanta Somalida loogu soo celin lahaa Safaaradda, ka dib markii ay qabsadeen Qareeno, dacwadna ku soo oogay ganacsatadaasi.
Dhismaha Safaaradda, ayaa waxaa saddexdii sano ee ugu dambeysay laga kireeyay ganacsatada, markii ay heshiis wada gaareen Diblomaasiyiin Somaliyeed oo horey uga tirsanaa Safaaradda.
Safaaradda, ayaa muddo sanado ka dib waxaa dib Khamiistii looga taagey Calanka Jamhuuriyadda Somaliya, iyadoona ay soo dhaweysay bulshada Somaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi.
Danjire Muuse Xasan Sheekh, ayaa sheegay in Khamiistii ay Maxkamaddu amartay in dib Somalida loogu celiyo Dhismaha Safaaradda, isagoo intaa raaciyay inay la wareegen furihii Safaaaradda.
Danjiraha oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee VOA, ayaa bidhaamiyay ajaaniibtii Safaaradda laga kireeyay in yoolkoodu uu ahaa in hotel iyo maqaaxi laga cunteeyo ka hirgeliyaan Dhismaha Safaaradda.
Tallaabada dib loogu soo celiyay Xaruntii Safaaradda Somaliya (Roma), ayaa waxay ku soo beegmaysaa, xilli sanadihii ugu dambeeyay lagu guuleystay in dib gacanta Somalida loogu soo celiyo Dhismooyinkii Safaaradaha Somalida Ee Kenya, Germany iyo Bilgium